I-Sprinklr: Ukuvikeleka Komphakathi Okuvikelekile Kwebhizinisi | Martech Zone
NgoLwesithathu, ngoMashi 6, 2013 Douglas Karr
Izinhlangano zebhizinisi zinezingqinamba eziningi ezidinga ukuthi imikhiqizo yazo ithuthukiswe ngendlela ehlukile. Izicelo zebhizinisi zinezindima eziphezulu, izimvume, ukubika nokuhamba komsebenzi, zingadinga imikhondo yokuhlolwa kwezimboni zezempilo nezezezimali, futhi kufanele zikalwe ngokufanele. Ngaphakathi kwezokuxhumana, lokhu kuyinselelo eyedlulele ngenxa yezinselelo ezinkulu zedatha nezinkundla eziningi ezifinyelelwe.
I-Altimeter ibalwe Fafaza as onekhono kakhulu ukuhlangabezana nezidingo zamabhizinisi amakhulu. I-Econsultancy ikleliswe nge-Sprinklr ipulatifomu enamandla kakhulu we-Enterprise iminyaka emibili ilandelana. Ngokuphela Ama-200 amagama emizi njengamakhasimende nokuthunyelwa okufika kubasebenzisi abangama-5000 emazweni angama-10s… nakanjani bahola iphakethe.
I-Sprinklr inikeza ipulatifomu ye-SaaS yebhizinisi yangempela enikeza:
Ukuphathwa Komphakathi kufaka phakathi ubunikazi be-akhawunti nokuvunyelwa kuwo wonke amabhizinisi angaphakathi nezindawo.
Ukuzibandakanya Komphakathi kuma-akhawunti amaningi nakwiziteshi (i-Facebook, i-Twitter, i-LinkedIn, i-Youtube, i-Flickr, i-Foursquare, i-Slideshare, ama-Blogs njll) kufaka phakathi ukuhamba komsebenzi kanye nokuphathwa okuqhubekayo kufaka phakathi ukutholwa, ukukhethwa kanye nokushicilelwa kweziteshi eziningi.
Ukuphathwa kwezithameli zomphakathi kufaka phakathi ithonya nokuzibandakanya kokufaka amaphuzu kumaSocial Analytics okunikezela ngesiteshi segranular kanye nokubika komkhankaso kanye nokuqonda.
Ukuhlanganiswa Komphakathi ukunika amandla ukuxhumana nezinhlelo ezikhona zokuthengiselana nokubika.
Ngenkathi kukhona eminye imikhiqizo encintisana esikhaleni sebhizinisi, kukhona abahlukanisi abalulekile abavela eSprinklr. Okokuqala, kunjalo kuphela kugxile ebhizinisini. Ngaphezulu kwama-80% amaklayenti abo anemali engaphezu kwe- $ 1bn emalini engenayo. Uhlelo lwabo lweSocial Media Management luhlinzeka ngengqalasizinda ukunika amandla ibhizinisi lezenhlalo kuzo zonke iziteshi, amaqembu, imisebenzi, ukwahlukana, kanye nezindawo. Futhi zakhelwe ukukala - izinto ezinjengokucutshungulwa kolimi lwendalo, imithetho ezenzakalelayo enezimbangela, izenzo, nezihlungi, ukubusa kwezenhlalakahle. Uma usebenza nezinombolo ezinkulu zama-akhawunti, izingxoxo, noma abasebenzisi, KUMELE ube nalokhu kungenjalo uzofa.
Fafaza okusanda kushicilelwa le Whitepaper, Izindlela ezihamba phambili zokuThuthukiswa Kokuxhumana Komphakathi Okuvikelekile:
Tags: imithombo yezokuxhumana yebhizinisiukuhamba komsebenzi kwezokuxhumana kwezenhlaloimithombo yezokuxhumana eneziteshi eziningiimithombo yezokuxhumana ehlukanisa izinto eziningiukucutshungulwa kwezilimi zemveloanalytics media socialideshibhodi yezokuxhumanaukuphathwa kwezokuxhumana
Ngemuva kwe-Facebook Like Button